Accountant(Female) (150,000~200,000 MMK) Code-12384
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Medical Product များကို Trading လုပ်သောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများ ခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– LCCI II အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
– အသက် (၂၀-၂၅)နှစ်အတွင်းရှိရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။
– Computer Excel, Word အသုံးပြု နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
– English စာ အခြေခံ 4skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Job Tags: accountant(female). Salary: 100,000 - 300,000. 195 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ